ပစ္စည်းပြန်ပို့မှုနှင့် ငွေပြန်အမ်းမှုများ | ONE Championship ဆိုင် Myanmar
ONE Championship ထံမှဝယ်ယူထားသည့်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို မည်သို့ပြန်ပို့ရမည်နည်း။?
ချွတ်ယွင်းချက်ရှိသော သို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသောပစ္စည်းကို လဲလှယ်နိင်ပါသလား။?
မည်သည့်အခြေအနေများတွင် သင်သည် ပစ္စည်းပြန်ပို့မှု တစ်ခုကို တောင်းဆိုနိုင်သနည်း။?
ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ပြန်ပို့ရန်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီမည့် အချိန်ကာလမှာအဘယ်နည်း။ အမျိုးအစား?
ပစ္စည်း(များ)ကို မူဝါဒသက်တမ်းကာလပြီးနောက် ပြန်ပို့နိုင်ပါသလား။?
ပြန့်ပို့သည့်ပစ္စည်းအတွက် ပို့ဆောင်မှုစရိတ်ကို ကျွန်ုပ်မှကျခံရမည်လား။?
ပစ္စည်းပြန်ပို့မှုများအတွက် ပို့ဆောင်မှုစရိတ်ကို သင်မှ ကျခံရန်မလိုအပ်ပါ။?
ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ပြန်ပို့လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့သို့ အောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာမှတဆင့် ဆက်သွယ်ပေးပါ−
အထူးသဖြင့် ပြန်ပို့ရမည့်ကုန်ပစ္စည်းမှာ ပျက်စီး/ချွတ်ယွင်းနေပါက၊ ပြန်ပို့အော်ဒါ၏ပုံများကိုသင်မှ ပေးပို့ရန်လိုအပ်သည်။
ပစ္စည်းကိုပြန်ထုပ်ပိုး၍ သင့်အီးမေးလ်သို့ပေးပို့ထားသည့် လေကြောင်းဘီလ်ကို တွဲကပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့မှ ပြန်ပို့ရန်တောင်းဆိုခြင်းခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးနောက် အလုပ်လုပ်ရက် 1-5 အတွင်း ထိုအထုပ်ကိုလာယူရန်အတွက် ပို့ဝန်ဆောင်သူပါတနာတစ်ဉီးအားစီစဉ်ပေးလိမ့်မည်။
ထို့နောက်တွင် ငွေပြန်အမ်းမှုများကို လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
သင်၏ပစ္စည်းကို အရောင် သို့မဟုတ် ဆိုဒ်အသစ်တစ်ခုသို့လဲလှယ်လိုပါက၊ သင့်၏မူလအော်ဒါကို ပြန်ပို့ပေးပြီး သင်အလိုရှိသောပစ္စည်းအတွက် အော်ဒါအသစ်တစ်ခုမှာယူထားရှိပါ။
သင့်ထံသို့ထိုငွေပမာဏကိုအလုပ်လုပ်ရက် 7-14 ရက်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့မှ ငွေပြန်အမ်း ပေးပါလိမ့်မည်။(သင်၏အကောင့်ထဲသို့ ထိုငွေပမာဏ အမှန်တကယ်ခရက်ဒစ်ပြန်ရောက်ရှိသောရက်မှာ သင့်ဘဏ်၏မူဝါဒနှင့် အသုံးပြုသည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအပေါ်တွင် မူတည်လိမ့်မည်။)
အကယ်၍သင်သည်ချွတ်ယွင်းချက်ရှိသော သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသောကုန်ပစ္စည်းကို လဲလှယ်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့သို့ထိုကုန်ပစ္စည်း၏ တွဲဘက်ပုံများနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့မှ သင့်အားပစ္စည်းပြန်ပို့ရန်ဖောင်ပုံစံတစ်ခုပေးပို့၍ ကူညီပါလိမ့်မည်။
မည်သည့်အခြေအနေများတွင် သင်သည် ပစ္စည်းပြန်ပို့မှု တစ်ခုကို တောင်းဆိုနိုင်သနည်း။
ပစ္စည်းမှာ ချွတ်ယွင်းချက် သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေခဲ့သည်
မှားယွင်း၍ပေးပို့ထားခြင်း(ONE ဝဘ်ဆိုဒ်/အက်ပ်ပေါ်တွင်တွေ့ရသည် ကုန်ပစ္စည်းပုံသည် သင်ထံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည့် ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အတိအကျကိုယ်စားပြုချက်သော်လည်းကောင်း၊ ထိုအတိုင်းအတိအကျမဖြစ်ပဲသော်လည်းကောင်းဖြစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ)
ရှိပါသည်၊ အောက်ပါတို့မှာပစ္စည်းပြန်ပို့မှု အတွက် အရည်အချင်းမပြည့်မီသောပေးထားသည့်ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းဖြစ်သည်−
ပို့နိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ကို အောက်ပါ အီးမေးလ်လိပ်စာမှတဆင့်ဆက်သွယ်၍ အော်ဒါအိုင်ဒီ/အော်ဒါခွဲအိုင်ဒီကို အီးမေးလ် အကြောင်းအရာထဲတွင် ဖော်ပြပေးပါ။
အဝတ်အစားများ 14 ရက်
အဝတ်အစားမဟုတ်သည်များ 07 ရက်
ကံဆုံးစွာပင်၊ ပစ္စည်းများကို မူဝါဒသက်တမ်းကာလပြီးနောက်တွင် ပြန်မပို့နိုင်ပါ။
လုပ်ဆောင်ပါသည်၊ ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကို အောက်ပါအခြေအနေများအတွက် စစ်ဆေးရပါသည်−
* ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးတွင် မူရင်းအမှတ်တံဆိပ်များ/MEI/အမည်/ပုံ/ဘရန်း/အမှတ်စဉ်နံပါတ်/ ပစ္စည်းနံပါတ်/ဘားကုဒ် တို့ရှိရမည်
* ကုန်ပစ္စည်းမှာ အသုံးပြုထားခြင်း၊ ဆေးကြောထားခြင်း၊ ညစ်ပေနေခြင်းမရှိသင့်ပါ
ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့်ငွေပေးချေမှုများအတွက်သင့်ဘဏ်အကောင့်အတွင်းသို့ ခရက်ဒစ်လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ကာခရက်ဒစ်ကဒ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင်အလုပ်လုပ်ရ က်7– 14 ရက်အတွင်း ထင်ဟပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ပို့ဆောင်ချိန်တွင်ငွေသားဖြင့်ပေးချေမှုနှင့် အင်တာနက်ဘဏ်လုပ်ငန်းကဲ့သို့သော အခြားငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများအတွက် ငွေပြန်အမ်းမှုများကို ဘဏ်ငွေလွှဲမှတဆင့်လုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။
ငွေပြန်အမ်းမှုများကိုလုပ်ဆောင်သည့်နည်းစနစ်ကို သင့်အားအသိပေးခြင်းမရှိပဲ အချိန်မရွေးပြုပြင်မွမ်းမံရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင်အခွင့်ရေးရှိသည်ကို သတိပြုပေးပါ။
ငွေပြန်အမ်းမှုများကိုအလုပ်လုပ်ရက်7– 14 ရက်အတွင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏အကောင့်ထဲသို့ ထိုငွေပမာဏ အမှန်တကယ်ခရက်ဒစ်ပြန်ရောက်ရှိသော ရက်မှာ သင့်ဘဏ်၏မူဝါဒနှင့် အသုံးပြုသည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအပေါ်တွင် မူတည်လိမ့်မည်။
ကြည့်နိုင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ကို အောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာမှတဆင့် အီးမေးလ်ပို့နိုင်ပြီးသင်၏အော်ဒါအိုင်ဒီကိုအီးမေးလ်အကြောင်းအရာထဲတွင်ဖော်ပြ၍ သင်၏ငွေပြန်အမ်းမှုအခြေအနေကို စုံစမ်းပါ။